Yonke into ekufuneka uyazi ngeDragball Super - Inkcubeko Yopopu
Yonke into ekufuneka uyazi ngeDragball Super
Emva kweminyaka eli-18 ngaphandle kokutsha ibhola yedragini uthotho, uToeiUopopayi bakhuphe isahluko esilandelayo ekudala silindelwe, I-Dragon Ball Super , eJapan ngexesha lasehlotyeni lika-2015. Ibhola yenamba Z zibaxiwe, inye into ongenakuyikhanyela ziimpembelelo zoluhlu. I-U.S. Ilikhaya lomkhosi wejoni ibhola yedragini abalandeli, ngokudlula kubantu abaye banamathela kwimiboniso bhanyabhanya emva kokubona ii-English dubs zohambo lweZ. I-fanbase ivutha, ngesizathu esivakalayo.
Kulabo abangakhange bachithe ishumi leminyaka elidlulileyo boning up on ibhola yedragini Iintsomi, uthotho lwamaziko ajikeleze ubomi kunye namaxesha kaGoku, okhule evela kwisibindi Saiyan inkwenkwe ibe yindoda, ikhaba iesile kakhulu kwaye ikhusela umhlaba kumgca omde weentshaba eziyingozi. Endleleni, uzenzele usapho (olubandakanya abalwa njengoGohan kunye noGoten), wafumana abahlobo apha endleleni (kubandakanya iqabane lakhe lobuntwana uBulma kunye nomyeni wakhe, owayelutshaba lukaGoku kunye noSaiyanVegeta), kwaye waya esiphelweni Umhlaba ukuze ube ngowona mlweli unamandla anokuba nguye. Inkampani yeGokuand ifumene iindlela zokuphucula izakhono zabo zokulwa ngokutshintsha zenze iifom ezintsha zeSaiyan, ezikhokelela kutshintsho lwemibala yeenwele, isantya, amandla kunye nokunye. Kwimfazwe yabo, balwa nabona bantu banamandla nababulala umhlaba, kubandakanya uMajin Buu, owoyiswayo ekupheleni Ibhola yenamba Z . Kwaye, zihlobo zam, kulapho ibali lika I-Dragon Ball Super ucholo.
I-Dragon Ball Super kukuthi, ngeli xesha lokubhalwa, iziqendu ezingama-72, kodwa ukuqubha kwabantu abadala ekugqibeleni, ngokusesikweni Ukuzisa umboniso ngalo Mgqibelo, Jan. 7, ngo-11: 30 ngokuhlwa, nge Umlingisi kaDanny Brown kwi-tow. Kuba bekusasazwa unyaka onesiqingatha phesheya kolwandle, ingxoxo kwi-Intanethi malunga nomboniso sele igcwele. Kodwa masingahambi ngaphambili kwethu. Okwethu abaseMelika abathi sukuyenza Sebenzisa iBitTorrent, ibilixesha elide lihle okoko besine ntsha ibhola yedragini iziqendu. Nokuba umntu omdala ebhukuda edlala Dragon Ball Z Kai: Izahluko zokugqibela njengomanduleli, usenokusebenzisa uhlobo oluthile lokuqala. Ke masiwele kwiziseko, icebo lokuba unokulindela ntoni ... zombini zilungile kwaye azilunganga kangako. Cinga oku ngokukhawuleza, Iseshoni yoqeqesho lomxhuzulane eyi-100x kuyo yonke into oyifunayo kufuneka ungene kuyo I-Dragon Ball Super .
'Super' Pick (Around) Apho 'Z' zishiye khona
Ngelixa le intsha ibhola yedragini ibali lendaba kwiminyaka eyi-18, I-Dragon Ball Super ayikhethi apho Dragon Ball GT uyekile. GT yayiloluhlu olwaqala malunga nenyanga emva koko Ibhola yenamba Z Ukubaleka kwantlandlolo, okuthabathe malunga neminyaka emihlanu emva kweziganeko ze NGE . Kodwa endaweni yokusekwa kuthotho lwama-manga, GT yayiyintsomi entsha yoqobo ethi, ngelixa babenexesha elithile lokwenyani, babuyisela i-Gokuback emntwaneni kwakhona kwaye bawa phantsi ngobuso. I-Dragon Ball Super Nangona kunjalo, yenzeka malunga neenyanga ezintandathu emva kokuba boyisiwe uBuu Ibhola yenamba Z , Ngexesha apho uMhlaba unoxolo kwaye ubuyela esiqhelweni. Oko kuyenza ngokufanelekileyo GT Ilize kwaye ayinamsebenzi, enokukholisa abaninzi ibhola yedragini abalandeli.
ingaba abafileyo abahambahambayo benza malini
Unokubona ezinye zale nto ngaphambili
Ukuba uyafa ibhola yedragini fan, uyazi ukuba ibali alizange liqale okanye liphele ngothotho lweopopayi. Bahlala kwi-manga, kwaye bekukho ezimbalwa ibhola yedragini Iimpawu zobude beemifanekiso bhanyabhanya, kubandakanya ne-2013's Imfazwe yoothixo kunye no-2015 Uvuko F . Ngelixa kufanele ukuba ubabukele ukuze bafumane umda opheleleyo we ibhola yedragini iphela, ukuba awukwenzi, musa ukukhubeka: I-Dragon Ball Super Ibandakanya zombini ezi bhanyabhanya iziqendu zayo zokuqala ezingama-27, okuthetha ukuba uza kubona amaZ elwa edabini noThixo woBhubhiso Beerus (laa kati imfusa ijonge dude ngasekunene) kunye nokubuya kweFrieza.
Oopopayi banemicimbi ethile
Njengo Kotaku ikhonjwe ngaphandle ngo-Agasti ka-2015, kukho amaxesha amabi akhangeleka kakubi ngaphakathi I-Dragon Ball Super . Ngelixa sikuthiyile ukuthethelela ukunqongophala komgangatho wezinye zezi zigcawu, ityala linokubekwa ngokuthe ngqo kwimo yokusebenza ephambeneyo ebekwa phantsi kweempopayi zaseJapan, apho ibango eliphezulu kakhulu kunye nexesha elibekiweyo lomvuzo ophantsi lithetha ukuba ukhubazekile -ijonga iGoku ilwa neBeerus. Ngelixa Ikopi yoqhakamshelwano yenza idilesi Isiqendu esingentla sopopayi seBlu-ray kunye neDVD, akukho lizwi lokuba ezi zinto zilungisiweyo zilungisiwe ukuba zibaleke e-U.S.
Iifom ezintsha ziya kutyhilwa
Uyayibona lonto? Ezo ziTrunk zitsala i-f * ckup kungekudala kakhulu. Nanku ukujonga ukuba utshintsho luyehla njani.
Iziqu ezitsha Ifom yeSuper Saiyan #DragonBallSuper pic.twitter.com/CrF7hU7Mm8
-DBZanto (@dbzanto) Nge-9 ka-Okthobha ka-2016
Abafaki baye bahamba ngebhola yeyiphi le fomu intsha, kodwa yazi ukuba ayisiyiyo eyokuqala ifom entsha oza kuyibona kuyo Super . Sithanda ukukwazisa kwiSuper SaiyanRose:
Ukuya kule fomu kuya nakwindlela nayo Ummandla we-spoiler-y Ukuchaza oku, kodwa yazi ukuba i-ante inyuka ngexesha lolu ngcelele lutsha. Unelungelo lokuba nemincili.
Ukuba ubungumlandeli we Ibhola yenamba Z , kodwa ndaziva ngathi GT ishiye incasa eyoyikekayo emlonyeni wakho, iziphoso zizakulungiswa kwakhona. Kwaye nayo yonke into ukusuka ekuvuseleleni kwe-vinyl ukuya Iincopho zamawele ukufumana ixesha elitsha, kuvakala ngathi ngoku lelona xesha lilungileyo lokuphinda ujonge i ibhola yedragini iphela. Sinqwenela kuphela ukuba sibe nezo Midlalo zeDragoni ngoku, ngoko ke sinqwenela ukuba lonke uthotho lube nokubakho kule mpelaveki.
Ikhekhe ebomvu yevelvet yekeyiki yetshokholethi
Uyenza njani ikhekhe le-unicorn ye-3d
Uyenza njani iresiphi yesipili
Iresiphi yekhekhe yokutya yengebheli kunye namaqunube kunye nesabhokhwe esipholileyo